Nagarik News - ‘तेस्रो बजार खडा गर्न पाइँदैन'
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पछिल्लो चरणमा भित्र्याएको २७ सेयर दलाल कम्पनीमध्ये एक कालिका सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक हुन नरेन्द्र सिजापति। कालिका सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले दैनिक कारोबार गर्नुका अतिरिक्त उनले दलाल व्यवसायीहरुको संगठन स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालको नेतृत्व पनि गरिरहेका छन्। सिजापतति सँग नेपालको पुँजी बजार बारे नागरिकले गरेको कुराकानी :
सेयर बजारको वर्तमान अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
वर्तमान समयमा धितोपत्र कारोबार रकममा उल्लेख्य वृद्वि भइरहेको, सूचीकृत कम्पनीहरुको संख्या साथै बजारको आकार पनि बढेको छ। ब्रोकरहरुको संख्या ५० भएका कारण आफ्नो पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्दैछन्। धितोपत्र कारोबारमा आम लगानीकर्ताहरुको पहुँच सरल र सहज भएको छ। बजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ। सेयर बजारमा सिमित व्यक्ति र समूहहरुको प्रभाव न्यून छ। लगानीकर्ताहरु विवेकशील बन्दैछन्। यस्ता विभिन्न कारणहरुले वर्तमान अवस्थामा सेयर बजार सकरात्मक दिशातर्फ अघि बढ्दै छ। लगानीको अन्य विकल्प नभएको र अधिक तरलता भएको हालको अवस्थामा नेप्से इन्डेक्स करिब ८ सयको हाराहारीमा रहनु अति सामान्य हो।
स्टक ब्रोकरको मिलेमतोमा सेयर बजार तलमाथि हुने गर्छ भन्छन नि, तपाई के भन्नुहुन्छ?
ब्रोकरको मुख्य कर्तव्य ग्राहकहरुले प्रक्रिया पुर्याभई दिएका धितोपत्रको खरिद वा बिक्री आदेशको कार्यान्वन गराउनु हो। त्यसमा पनि आदेश प्रविष्टिका लागि नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा मूल्यको २ प्रतिशत तलमाथिको सीमा तोकिएको हुन्छ। त्यो मूल्य सीमाभित्र परेका आदेशहरु मात्र ब्रोकरले कारोबारका लागि प्रविष्टि गर्न सक्छन्। कसको आदेश असल नियतले आएको हो र कसको आदेश बजार तलमाथि गर्ने नियतले आएको छुट्ट्याउन त्यति सरल नहोला। मूल्य तथा समय प्राथमिकतामा कारोबार हुने अवस्थामा सजिलै चाहेको मूल्यमा कारोबार गराउन पनि सकिदैन। धितोपत्र सम्बन्धि ऐन तथा सोअन्तर्गत बनेका नियम/विनियम हरुमा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने वा मूल्यमा उतारचढाव पार्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यो अवस्थामा लगानीकर्ता, ब्रोकर वा अन्य जोसुकैको संलग्नता भए पनि त्यो कानुनबिपरीत भएकाले कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ। सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने धेरै कारणहरु हुन्छन् सोही आधारमा लगानीकर्ताहरुले निर्णय गर्ने हुदा जोखिम र प्रतिफलको भागिदार लगानीकर्ताहरु नै हुने भएकोले यसमा ब्रोकरहरुको संलग्नता हुनै सक्दैन।
लगानीकर्ताको भन्दा आफ्नै सेयर किनबेचमा ब्रोकर व्यस्त हुन्छन भन्ने आरोप छ नि?
ब्रोकर ब्यवसायी हरु संगठित संस्था हुन् व्यक्ति होइनन्। ब्रोकर कम्पनीको एक मात्र आय स्रोत नै लगानीकर्ताको कारोबार गरीदिए बापत प्राप्त हुने कमिसन हो। यसकारण लगानीकर्ताको सेयर किनबेच नगर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। कुन व्यवसायीले आफ्नो व्यापार कम होस् भन्ने चाहन्छ र? जहा“ सम्म ब्रोकर कम्पनीस“ग सम्वद्ध व्यक्तिहरुको आफ्नै कारोबारको कुरा छ, ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकहरु, सेयरधनीहरु तथा अन्य कर्मचारीहरुले आफ्नो वा आफ्ना नजिकका नातेदारको नाममा समेत कारोबार गर्न पाउदैनन्। यती हुदा“हु“दै पनि यस्तो कारोबार अरु कुनै नाममा गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिविशेषको कुरा भयो, ब्रोकर कम्पनीहरु तथा समग्र ब्रोकर व्यवसायलाई नै यसरी मुछ्नु धितोपत्र बजारकै लागि राम्रो सन्देश जादैन। फेरि त्यसको अनुगमनका लागि नेप्से तथा धितोपत्र बोर्डले पर्याप्त सावधानी अपनाएकै देखिन्छ। जस्तो ब्रोकर कम्पनी का सञ्चालक तथा सेयरधनीहरुको नजिकका नातेदारहरुको अद्यावधिक विवरण माग्ने, कुनै कारोबारस“ग सम्बन्धित ग्राहक परिचय फारम, आदेश फारम आदिको निरीक्षण गर्ने कार्यहरु भई रहेका छन्। आजका दिनसम्म ब्रोकरले नियमनकारी निकायलाई लिखित जानकारी नगराई आफ्नो नाममा सेयर खरिद बिक्री गरेको पाइएको छैन। साथै लगानीकर्ताहरु स्वयंले नै खरिद बिक्री आदेश कारोबार प्रणलीमा प्रविष्टि गर्ने पद्दती आएपछि सो आरोप स्वतः हट्ने छ।
.ब्रोकर कमिसन चर्को भयो भन्ने गुनासो बारे तपाईको भनाई के छ?
ब्रोकर कमिशन ०.७ प्रतिशत देखि १ प्रतिशत सम्म छ। सो रकमको पनि २५ प्रतिशत नेप्सेले लिन्छ। बाँकि ७५ प्रतिशत मा पनि १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टि हुन्छ। जसबाट बचेको रकमले कार्यालय भाडा, दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरु, कागजपत्र, विद्युत्, इन्टरनेटलगायत अन्य खर्च आदि धान्नु पर्छ साथै भौतिक रुपमा हुने कारोबार, राफसाफ, नामसारी प्रक्रियामा निहित जोखिमबाट उत्पन्न हुने दायित्वहरु व्यहोर्न पनि मुस्किल पर्ने हुन्छ। सिडिएस सञ्चालन भएपछि सो जोखिमहरु कम हुने हुँदा ब्रोकरहरुले आफ्नो सेवा र लगानीको प्रतिफल पाउने छन्। अहिले उच्च भनिएको कारोबार रकममा समेत अधिकांश ब्रोकर कम्पनीको लगानीमा प्रतिफल दर निकै कम छ। नाफा रकम निकै कम वा नोक्सान हुँदा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी भएको रकम ट्याक्स क्रेडिटको रुपमा थुप्रिएर रहेको छ। बरु सो अग्रिम करकट्टीको दर घटाउनु पर्छ भनी ब्रोकर कम्पनीले आवाज उठाउन थालेका छन्।
हालै ब्रोकर एसोसिएसनले कुनै लगानीकर्ताको सेयर कारोबार गर्दैनौं भन्ने निर्णय गर्योथ, त्यस्तो गर्न पाइन्छ?
कुरा व्यक्तिको होइन विधिको हो। धितोपत्र बजारमा हुने हरेक कारोबारबाट विक्रेताले रकम र खरिदकर्ताले आफ्नो स्वामित्वमा सेयर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नसके धितोपत्र कारोबारमा लगानीकर्ताको विश्वास रहदैन र बजारको विकास पनि हुन सक्दैन। एसोसिएसन, ब्रोकर ब्यवसाय तथा समग्र बजार विकास र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हकहितको लागि स्थापित संस्था हो। दोस्रो बजारमा भएका कारोबारहरु कच्चा ठहरिन थाले भने कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ होला कल्पनासम्म गर्न मुश्किल छ। हो यही अवस्था आउन नदिन ब्रोकरहरुले सामूहिक रुपमा नियमनकारी निकायहरुलाई जानकारी दिइ सावधानी अपनाएका हुन्। यसै सर्न्दभमा एसोसियसनले लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्नको लागि आफूले बिक्री गरिएको सेयर खरिदकर्ताको नाममा विनाशर्त नामसारी हुनुपर्छ भन्ने चेतना आम लगानीकर्तामा जागृत होस् भन्ने हेतुले पहल कदमी लिएको हो। जसलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक छानविन गरिरहेको छ।
बिटीमा रहेको सेयर आर्थिक वर्षको अन्तमा वा बुक क्लोज हुनुभन्दा अगाडि ओटीमा पठाउनुपर्ने नियम हुँदाहुँदै, ब्रोकरले त्यसो किन गरेनन्?
कुनै पनि खरिद गरिएको सेयर नामसारी पठाउन खरिदकर्ताले सम्बन्धित कम्पनीमा हक कायम गरी दाखिल खारेज गरी पाऊँ भनि निवेदन गर्नु पर्ने हुन्छ। उक्त निवेदन गर्नलाई कुनै पनि ब्रोकरले लगानीकर्ताहरुलाई वाध्य पार्ने अधिकार छैन। जसका कारण त्यो नियम पूर्ण लागु हुन नसकेको हो। यस प्रक्रियामा ब्रोकरहरुले आवश्यक कागजात मिलाउन सहयोगीको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हुँदा ब्रोकरको पहलले मात्र यो नियम पूर्ण रुपमा पालना गराउन सकिदैन्। लगानीकर्ताले नामसारी पठाउन हस्ताक्षर गर्न अन्कनाउँछन् यो के कारणले पनी हो भने नामसारीका लागि पठाएको प्रमाणपत्र प्राप्त हुन असाधारण बिलम्ब हुने गरेको छ। यो नामसारी सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था/नियम बमोजिम छैन। यसबाट लगानीकर्ताहरु बजारको अवसर बाट बञ्चित भइरहेका छन्। सिडिएस को कार्यन्वयन पछि यि समस्याहरु न्यूनीकरण हुनेछन्।
हालैको एक घटनामा सूचीकृत कम्पनीको सेयरलाई घरायसी लेनदेनमा प्रयोग गरेको पाइयो, यसबाट तेस्रो बजार खडा भएन र?
सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर कारोबार गर्ने वा हक हस्तान्तरण गर्ने थलो धितोपत्र बजार मात्र हो। धितोपत्र बजारमा धितोपत्रको खरीद बिक्री विशेष बिडिङ मेकानीजममा हुन्छ। जसको कारणले क्रेता बिक्रेताको तय समेत सोही प्रणालीले गर्छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयरलाई घरायसी लेनदेनमा प्रयोग गर्न पाइन्छ वा पाइन्न भन्ने आधिकारीक निकाय हामी होइनौ। धितोपत्र ऐन अनुसार तेस्रो बजार खडा गर्न पाइदैन। कुनै दुई वा बढी लगनीकर्ताहरुको घरायसी लेनदेनको कारणले धितोपत्र बजारका आमलगानी कर्ताहरुलाई कुनै पनि प्रकारको हानी नोक्सानी पुग्न हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसलाई थप स्पष्ट पार्न नियमनकारी निकायहरु अघि बढ्न आवश्यक छ।
काठमाडौं बाहिरका लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्न पाइरहेका छैनन, यसमा ब्रोकर एसोसिएसनले पनि केही भूमिका खेल्न सक्दैन?
धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्ताहरुले सेयर कारोबार गर्न पाउन भन्ने चाहना हामी सबैको हो। उपत्यकाबाहिर पोखरा, नारायणगढ, विराटनगर र धरानमा यो सेवा उपलब्ध छ। यद्यपी सञ्चालन खर्च धान्न नसके पनि हामीले यस्तो सेवा प्रदान गरिरहेका छौ। भौतिक रुपमा तीन दिन भित्र सेयरको राफसाफ गर्नुपर्ने झन्झटिलो वर्तमान व्यवस्थाका कारण देशभर हाम्रो उपस्थिति हुन नसकेको हो। यसैका लागि एसोसिएसनले तत्काल सिडिएस सञ्चालन गर्न मरिमेटेको छ। नेप्सेले कारोबार प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन सके यो समस्याको समाधान हुने थियो। धितोपत्रको दोस्रोबजारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन हामी लाागि परेका छौ। यसो हुन सके राष्ट्रकै गौरवको विषय हुने थियो।
तपाईहरुकै कारण सिडिएस सञ्चालनमा ढिलाई भइरहेको छ भन्ने आरोप बारे के भन्नु हुन्छ?
यो आरोप झुटो हो हामी तदारुकता साथ सिडिएस सञ्चालन गराउन लागिरहेका छौ। हाल सम्पूर्ण ५० वटा ब्रोकर सिडिएसको राफसाफ सदस्य भइसकेका छन्। सिडिएससँग सर्भर कनेक्सन गर्ने कार्य चालु छ। राफसाफ बैंकसँग बैंक जमानत बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आजभोलि देखि नै बैंक जमानत तयार गरी सिडिएसमा पेश गरिनेछ र जमानत पेश गर्ने ब्रोकरहरुबाट यो सेवा प्रारम्म हुन सक्छ र चाडै नै सम्पूर्ण ब्रोकरबाट यो सेवा सुरु हुनेछ।
नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन?
धितोपत्र बजारको वर्तमान स्थिति विकासक्रम, आवश्यकता र आधुनिकीकरणले अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ छैन भन्ने निर्धारण हुने हो। आज पनि परम्परागत र यथास्थिति पद्दतिबाट सञ्चालित एक्सचेन्जले बजारले अपेक्षा गरेको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। खुला बजार अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ तर यसकै नाममा विद्यमान स्टक एक्सचेन्जको आधुनिकीकरण, पुँजी संरचनामा परिवर्तन, मानव संसाधनको विकास नगरी अर्को एक्सचेन्जको उपस्थिति तर्क र न्यायसंगत हुन सक्दैन। आर्थिक रुपमा पनि वर्तमान बजारमा रहेका सूचीकृत कम्पनीहरु एक भन्दा बढी एक्सचेन्जमा सूचिकृत भइहाल्छन जस्तो मलाई लाग्दैन। बजार ठूलो भएर वा लगानीकर्ता धेरै भएर अर्को स्टक एक्सचेज चाहिने अवस्था आइसकेको छ जस्तो मलाइ लाग्दैन। नेप्सेलाई थप आधुनिक तथा प्रभावकारी बनाउ“दै लैजाने भन्ने कुरा अर्को पाटो हो।
कुनैपनि एसोसिएसन आफैंमा ठूलो शक्ति हो। लगानीकर्ताको हित र बजारको विकासमा ब्रोकर एसोसिएसन जिम्मेवार ढंगले बढेको देखिदैन। पुजी बजारका नीतिगत कुरामा, संस्थागत संरचनाका बारेमा ब्रोकर एसोसिएसनले चासो दिएको छैन नि?
एसोसिएसन आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति सचेत छ। ब्रोकर व्यवसायलाई थप मर्यादित, पेशागत, विश्वासनीय बनाउदै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, पुँजी बजारको विकास गर्न एसोसिएसन लागि परेको छ। धितोपत्र बजारको समग्र विकासको लागि हरेक सरोकारवाला पक्षहरुसँग हातेमालो गर्दै एसोसिएसन अघि बढ्दै छ। पुँजी बजारका नीतिगत कुरामा आफ्नो सहभागितालाई स्थापित गरिरहेका छौं।